Kuyinto engafanele ukukhuluma ngokuthi yonke iminyaka yamuva imakwe ngesifiso somuntu ukwakha amakhaya abo. Le ndoda yaqaphela ukuthi izimo zokuphila ezinsukwini zamanje zisezingeni eliphezulu kakhulu, ngakho-ke i-ownership cottage yayisibe yimpumelelo yamaphupho kubantu abaningi bakithi.
Bekukhona lapho beza khona ngokumelene neqiniso elingathandeki ukuthi izindleko zezakhiwo zokwakha zaqala ukuphakama. Yini engenzeka ukwakha indlu yakho ngaphandle kokulahlekelwa yikho? Ochwepheshe bacebisa ukusebenzisa izivimbela ze-arbolitic. Izibuyekezo zithi umuntu angakha izindlu ezihloniphekile nezokuhlala ezivela kubo.
Uma ungewona umakhi, awukwazi neze ukuthi ungubani. Yebo, le nkinga idinga ukulethwa ngokucacile. Udaba lokuthi "i-arbolit" yinto ehlobene nokhonkolo okhishiwe. Ngaphandle kwe-samente, kufaka phakathi udoti olwenziwe ngamapulangwe: ama-shavings, sawdust nezinye "udoti".
Ngenxa yezigcwalisi ezithile, lokhu kulula kulula futhi kuyasebenza. Yiqiniso, ukugcwalisa okukhona futhi okusabalalisa kunciphisa kakhulu izindleko zokukhiqizwa nokwakhiwa. Yingakho abaningi bakhetha izivimbela ze-arbolitic. Ukubuyekezwa mayelana nalokhu okushiwo yi-material kuthiwa ngenani elincane kakhulu lemali uthola indlu egcwele.
Yiziphi izakhiwo ubuchwepheshe bokukhiqiza obunika i-arbolite? Okokuqala, ine-conducttivity ephansi yokushisa, inamandla ngokwanele, ayiziniki emlilweni nokushisa. Ngalokhu konke lokhu, ukwaziswa kunobungane ngaphezu kwemvelo efanayo ne-polysterelbetone efanayo kanye nezifanekiselo zayo.
Ngokuyinhloko, lokhu kubonakala ukuthi izindonga "ziphefumula". Ngakho-ke, i-arbolitic ivimbela, ukubuyekezwa kwayo kunethemba elihle, kuyindlela ehle kakhulu ekutheni izitini ezibizayo noma isihlahla esingapheli kakhulu. Ngokungafani nalezi zinsuku zokugcina, kuzodingeka wenze umzamo omncane wokuqeda indlu yangaphakathi, njengoba kunjalo.
Ukucabangela lokhu, amabhlogo we-arbolite , ubukhulu bawo angaphakathi kwemingcele ye-500x250x300 mm, ingasetshenziselwa ukulungiswa okusheshayo kwezindlu eziphezulu nezokuhlala.
Yiqiniso, hhayi ngaphandle kwezici ezingalungile. Ake siqaphele ukuthi abaningi kulabo abathandwa yizinto ezibonakalayo abathandanga, nhlobo ababheki "isici somuntu". Kulula nje, izindawo ezikulo mthombo zixhomeke kuphela endaweni yokukhiqiza.
Abanye abakhi bathi uma usebenza futhi ubeka izindonga udinga ukuyiqaphela. Ngokusobala kusuka kuzo izingcezu ezinkulu zingahle ziphulwe.
Lokhu kungenxa yokusetshenziswa kwekhwalithi engenele ekukhiqizeni kwe-samente. Ngaphezu kwalokho, kuvame ukuthi kwenzeke ukuthi "abomabhizinisi" basekhaya basekhaya basekhaya basekhaya basekhaya basekhaya bezitshalo ezingezona ezivamile, kodwa udoti wangempela. Lokho okuholela kukho kulula ukuqagela.
Kunoma yikuphi, i-arbolitic ivimbela, ukubuyekezwa okusheshayo kube yibi, akuhlangene naso.
Ngokusekelwe kulokhu okushiwo ngenhla, ungathola ezinye izinzuzo zendaba. Isibonelo, ukukhululeka kwayo kukuvumela ukuthi ungasebenzisi imishini yokwakha esindayo. Ubufakazi babantu abathokozelayo bathi basindise imali eningi, beqa izindonga kuphela.
Ngaphezu kwalokho, indlu ephuma kwi-arbolitic ivimbela ingasetshenziswa kwisisekelo esilula, esizogcina imali yakho.
Paned ngoba egumbini lokuphumula: i Uhlolojikelele, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza oluthandwa
Crossover Chinese JAC S5: ukubuyekezwa abanikazi. Emihle nemibi JAC S5